भ्लादिमिर पुटिनलाई हत्यारा आरोप लगाइएपछि…! | suryakhabar.com
Home अन्तर्राष्ट्रिय भ्लादिमिर पुटिनलाई हत्यारा आरोप लगाइएपछि…!
भ्लादिमिर पुटिनलाई हत्यारा आरोप लगाइएपछि…!
on: २५ माघ २०७३, मंगलवार ०८:१७ In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
मस्को – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई’हत्यारा’ शब्द प्रयोग गरिएपछि रूस आक्रोशित भएको छ । फक्स न्युजले शनिबार प्रसारण गरेको अन्तर्वार्तामा पुटिनलाई’हत्यारा’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । यसै विषयलाई लिएर रूसले सोमवार आक्रोश व्यक्त गर्दै फक्स न्युजले मागी माग्नुपर्ने अडान लिएको छ । रूसले आफ्नो देशका राष्ट्रपतिलाई कार्यक्रममा भनिएको शब्द अक्षम्य भएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो टिप्पणी रूसका लागि स्वीकार्य नहुने पनि उसको चेतावनी छ ।
मंगलबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, फक्स न्युजका पत्रकार बिल ओ राइलीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग लिएको अन्तर्वार्तामा पुटिनलाई ‘अ किलर’ भनेर चिनाएका थिए। पत्रकार राइलीले त्यस्ता ‘हत्यारा’ पुटिनलाई ट्रम्पले किन सम्मान गर्छन् भनेर प्रश्न गरेका थिए । यद्यपि ती पत्रकारले पुटिनलाई’अ किलर’ भनेर किन भनेका थिए, त्यसको भने खुलासा गरेनन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने अन्तर्वार्तामा पुटिनको प्रशंसा नै गरेका थिए। राइलीले ट्रम्पसँगको अन्तर्वार्तामा’तपाईं भ्लादिमिर पुटिनको सम्मान गर्नुहुन्छ’ भनेर सोधेका थिए। त्यसको जवाफमा ट्रम्पले पक्कै पनि भनेका थिए । त्यसलगत्तै राइलीले’त्यस्ता हत्यारा पुटिनको किन सम्मान गर्नुहुन्छ’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसको उत्तर दिँदै ट्रम्पले भने,’तपाईं (अमेरिका) मा थुप्रै हत्यारा छन्। के तपाईंले हाम्रो देश निर्दोष छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ? ‘
साढे ५ अर्ब मुआब्जा बाँडिदै
पशुपति क्षेत्र विकासको कोषको जग्गामा मनपरी
देशलाईआत्मनिर्भर बनाउने उपयुक्त अवसरः सांसद भट्टराई
२५ माघ २०७३, मंगलवार ०८:१७